Super PhotoCut Pro, onyinye dị ịtụnanya maka obere oge | Esi m mac
Anyị laghachi Esi m mac na otu n'ime onyinye ndị ahụ dị egwu na-ahapụ anyị n'ọnụ anyị. I choro wepụ kpamkpam ndabere nke onyonyo ụfọdụ? You ga - achọ inwe ike ikewapu ihu na ndabere nke ihe onyonyo ahụ? You na-achọkarị akuku ihe si oyiyi ma nwee ha na ntanetị iji mee montages ma debe ha ebe ịchọrọ na onyonyo gị? Ọfọn, ihe a niile na ọtụtụ ndị ọzọ ugbu a ị nwere ike ime ya na Mac gị, ngwa ngwa na ngwa ngwa, yana maka naanị otu euro ekele Super Foto Cut Pro.
Super Photo .kpụ kwa bụ ihe dị ike na-edezi onyonyo nke ị ga-enwe ike ịnye foto gị ogo dị mma ọkachamara, mepụta photomontages na ọtụtụ ndị ọzọ, n'ụzọ dị mfe ma dị gara gara, na-enweghị mkpa maka nnukwu ihe ọmụma n'ọhịa.
Ihe oyiyi ndabere
Super Foto Cut Pro bụ foto foto ngwa ngwa nke emeziri iji wepu onyonyo site na onyonyo ma mepụta ihe di iche na uzo uzo. Yabụ, ọ dị mma idobe onwe gị ịrị Everest, ịnọdụ ala n'akụkụ onye a ma ama ma ọ bụ ịnụ ụtọ anyanwụ n'akụkụ osimiri mara mma paradaịs.
Nke kachasị mma bụ na Ojiji ya dị mfe, anaghị achọ oké nkà ma ọ bụ ihe ọmụma, ekele ya "Intelligent algorithm" nke na - eji "nkenke nkenke".
Na mgbakwunye, ọ na-akwado ihe niile ụdị oyiyi ama ama dịka BMP, PNG, RAW, GIF, JPG, ọ nwere 20 ụdị mmetụta ngbanwe ndabere, mbugharị dị ike iji nyochaa nkọwa, nyocha nke mmetụta ikpeazụ, weghachite / gbanwee nhọrọ ka ị nwee ike ịlaghachi ngbanwe ikpeazụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Super Foto Cut Pro Ọ nwere a mgbe price nke € 49,99, Otú ọ dị ugbu a, dị ka akụkụ nke "Mac App Store Sale" nkwalite, ị nwere ike nweta ya na a 98% ego, na-akwụ ụgwọ naanị € 1,09 kpọmkwem na Mac App Store. Cheta na nkwalite ahụ ga-akwụsị echi, Fraịde, June 23 na etiti abalị, wee mee ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji uru ego a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Super PhotoCut Pro, oge inye onyinye dị oke egwu
Lọ ahịa Apple mbụ na Taiwan enweela ụbọchị